आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र ग्लोबल आइएमई क्यपिटलबिच संझौता
काठमाडौं, ३ पुस । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी र ग्लोवल आर्ईएमई क्यापिटलबिच सम्झौता भएको छ । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको २०७४ आश्विन १० गते सम्पन्न भएको २० औं बार्षिक साधारण सभाको निर्णयानुसार १०ः८ अन...
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्शियल बैङ्क लिमिटेडले अल्पाइन डेभलपमेण्ट बैङ्क र सेती फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेपछि एकिकृत कारोबार मङ्सिर २४ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । तीन कम्पनीको छुट्टाछुट्टै बसेको साधारण ...
सेयर कारोवार रकम घट्यो, सातामा दुुई अर्ब २३ करोड ७७ लाखको सेयर कारोवार (तालिका सहित)
काठमाडौं, ८ मंसिर । यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १८५ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार २३४९९ कारोबारबाट दुई अर्ब २३ करोड ७७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरका ५४ लाख ७४ हजार तीन सय कित्ता सेयरहरु ख...
श्री लालीगुराँसले १५ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मुनाफाबाट आफ्नो सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीको यही कात्तिक २१ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले सेयधनीलाई १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्ण...
नेप्से सुचक तथा कारोवार रकम दुुबै घट्यो, कसले कमायो–कसले गुमायो ? (तालिका सहित)
काठमाडौं, ३० कार्तिक । साताको अन्तिम कारोवार दिन आज बिहिबार नेप्से सुचक तथा कारोवार रकम दुुबै नै घटेको छ । नेप्से आज १५ दसमलव ७३ अंकले घटेर १४ सय ८९ दसमलव छ अंकमा पुुगेको छ भने सेन्सिटिभ तीन दसमलव ...
रिलायन्सको हकप्रद शेयरको लागि बुक क्लोज
काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको हकप्रद शेयर निष्कासन प्रयोजनको लागि मङ्सिर ८ गते बुक क्लोज रहेको छ । कम्पनीले १० बराबर ४ दशमलव ५ अनुपातमा रू. एक सय अङ्कित दरको २३ लाख ६ हजार ५ सय ७१ दशमलव ६...
सिभिल ४० प्रतिशत हकप्रदको लागि बुक क्लोज मिति तय
काठमाडौं । सिभिल बैंकले हकप्रद निष्काशनको लागि बुक क्लोज मिति तय गरेको छ । बैंकले १० बराबर ४ कित्ता सेयरका दरले हकप्रद निष्काशनको अनुमति मागेकोमा कात्तिक १ गते धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद निष्काशनको अनु...
टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकको महेन्द्रनगर शाखाको औपचारिक उद्घाटन
महेन्द्रनगर,२४ कार्तिक । टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तारको क्रममा कंचनपुर जिल्ला स्थित महेन्द्रनगर शाखाको औपचारिक उद्घाटन गरेको छ । बैंकद्वारा आज २०७४/ ०७/२४ गतेका दिन ...